Minisiteran’ny Asa : birao manara-penitra miisa 23 no hatsangana manerana ny Nosy – Depeche TARATRA
Accueil/Social/Minisiteran’ny Asa : birao manara-penitra miisa 23 no hatsangana manerana ny Nosy
Minisiteran’ny Asa : birao manara-penitra miisa 23 no hatsangana manerana ny Nosy
Hametraka trano fiasana manara-penitra miisa 23 manerana ny Nosy, izany hoe 1 isam-paritra ny ministeran’ny Asa, ny Fampanana asa, ny Asam-panjakana ary ny Lalàna sosialy. Efa an-dalam-pahavitana ny 9 amin’ireo birao manara-penitra ireo, ary vinavinaina horaisina mialoha ny faran’ity taona ity izany. Efa vita tamin’ny taona 2019 kosa ny an’ny faritra Atsimo Atsinanana.
Mba hahafahan’ireo biraom-panjakana ireo miasa avy hatrany dia hisy ny fampitaovana homen’ny ministera. Ankoatra izay, hisy fiara 6 hovidina, ary hatolotra ny fitaleavam-paritra ao Sava, Melaky, Boeny, Atsimo Andrefana, Anosy.
Nankatoavina nandritra ny filan-kevitry ny minisitra omaly ny fangatahana famatsiam-bola ahafahana mividy ireo fampitaovana sy fiarana ireo. Natao izany mba hisian’ny fitantanan-draharaham-panjakana manakaiky vahoaka sy ho fanatsarana ny fomba fiasan’ny fanjakana manatsara ny kalitaon’ny tolotra ho an’ny vahoaka.
Tafiditra anatin’ny teti-bolam-pankana nasiam-panitsiana 2021 ity fandaniana ity sady voarakitra ho isan’ny NPE (Nouveau Projet Emergent) koa.
“Téléphériques”: amin’ny jona no apetraka ireo andry lehibe
Émergence du Grand Sud: Un pipeline d’Efaho à Ambovombe
Kere : ny “tiomena” no tena manimba ny tany sy miteraka ny mosary any Atsimon’ny nosy
Iarivo manakaiky vahoaka : olona 1 000 nisitraka fizaham-pahasalamana maimaim-poana
PSE: andro voalohan’ny ady hevitra etsy Ampefiloha
OJM : kandida tokana no hofidina amin’ny 16 oktobra.